Nin looga shakisan yahay dirista baqshadihii bambooyinka ee Mareykanka oo la qabtay… – Hagaag.com
Nin looga shakisan yahay dirista baqshadihii bambooyinka ee Mareykanka oo la qabtay…
Posted on 27 Oktoobar 2018 by Admin in World // 0 Comments
Booliska gobolka Florida ayaa Cesar Sayoc oo ah 56-jir u soo qabtay baqshadihii bambooyinka ka sameysnaa ee loo diray masuuliyiin ka tirsan xisbiga dimuquraadiga dalka Mareykanka oo ka mid ah Hillary Clinton iyo madaxweyhihii hore Barack Obama.
Ninkan ayaa laga soo qabtay isaga oo ku sugan gudaha gaarigiisa oo yaalay goob gawaarida la dhigto oo ku taal magaalada Plantation ee gobolkaasi Florida, waxaana baaris lagu sameeyay gaarigiis lagu arkay boorar iyo qoraallo uu ku taageerayo madaxweyne Donald Trump kuwaas oo gaarigiisa ku xardhanaa.
Booliska ayaa sheegay in qabashada ninkan eysan ka dhigneyn in ay soo afjarantay cabsida la xiriirta baqshadahan, waxaana uu sheegay in ay wali jiri karaan waraaqo kale oo hawada kusoo jira kuwaas oo uu ninkani soo diray inta aan la qaban.
“Qabashada ninkan cashar ha u noqoto kuwa kale ee damacsan in ay dagaal siyaasadeed ku qaadaan siyaasiyiinta, waxaana ballan qaadeynaa in aan uga dabatagi doono meelkasta oo ay ku sugan yihiin”, ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay booliska.
Soo xiridda ninkan ayaa sahashay baaris DNA iyo farahiisa lagu sameeyay mid ka mid ah baqshadihii bambooyinka ee uu soo diray.
Ilaalada gaarka ah ee madaxda dalka Mareykanka ayaa xaqiijisay in warqado bom looga shakiyay loo diray guryaha ay ku nool yihiin Hillary Clinton iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo labaduba isku xisbi ah.
Warqadahan ayaa laga warhelay xilli ay hoolka boostada ku jireen islamarkaana scan la marsiinayay, waxaana iminka lagu wadaa baaris iyo dabagal cida soo dirtay.
Sidoo kale wararka ayaa sheegaya in waraaqo kuwaas la mid ah loo diray xubno ka tirsan isla xisbiga Dimoqoraadiga, iyadoona sidoo kale xarunta taleefishinka CNN-na laga bixiyay dadka iyada oo laga shakisan yahay in baqshad bom la keenay.
War qoraal ah oo kasoo baxay aqalka looga arrimiyo Mareykanka ee White House ayaa lagu cambaareeyay weerarka warqadahaasi loo diray xubnaha xisbiga Dimuquraadiga.